China Single Shaft Shredder Ukwenziwa kunye Factory | Jiarui
JRP series isityumzi
PC Series isityumzi
SWP Series isityumzi
I-shaft shredder ephindwe kabini
Ububanzi bepayipi enkulu
Shredder & Crusher bonke-in-nye umatshini
I-shaft shredder enye
Ukuhlamba umgca wokurisayikilisha
Umgca wePlastiki wokuthambisa
Izixhobo zeplastiki zokukhupha
Umgca wemveliso Pipe
Umgca wemveliso yeProfayili
I-Shaft Shredder engatsaliyo ifunxa iteknoloji yasekhaya neyangaphandle ehambele phambili; inoyilo olusengqiqweni kunye novavanyo oluphindaphindiweyo kwaye iqhubeka nokuphucula umatshini unezinto ezinje ngokusetyenziswa kwamandla asezantsi, umgangatho olungileyo.
I-shaft shredder enye yenziwe ngemoto, isinciphisi somhlaba esijijekileyo esinzima, ishafu shaft ejikelezayo, imela yokuhambisa engeniswe ngaphandle, isitshixo esisigxina, isakhelo, isiseko somatshini, ibhokisi, isilinda esine-hydraulic, impompo yeoyile, isilinda , iqonga lokusebenza kunye nezinye izinto eziphambili.
Imela ebekiweyo ifakwe kwisakhelo, kwaye kufakwa imela ehambisekayo ehambisekayo kwishafti yokujikeleza. Inani lemela elihambisekayo lixhomekeke kwiimodeli ezahlukeneyo kunye nobungakanani beshafti yokujikeleza. Guqula i-engile kude kube ngamacala angacacanga kwaye ulole imela. Ngenxa yokuba uhlobo uzipho ihamba imela kunye ukusika rotary, kunye imela esisigxina kunye imela ezihambayo amazwe amazwe ingxubevange intsimbi ezenziwe ,, ngoko ke ubomi inkonzo lide. Amandla okusika anamandla, amandla aphezulu emveliso, ukusetyenziswa kwesiqhelo ukuya kuthi ga kwi-1000-1200 yeetoni okanye ngaphezulu kwesidingo sokulola.
Xa i-shredder isebenza, izixhobo zihamba phambili iisilinda ze-hydraulic kwaye zixhotyiswe ngezixhobo zokubamba. Sebenzisa inkqubo yolawulo lwe-Nokia, enokulawulwa ngokuzenzekelayo. Inokuqala, ukumisa, ukubuyisela umva kunye nokulayisha ngaphezulu imisebenzi yokulawula umva ngokuzenzekelayo. Inempawu zesantya esisezantsi, torque enkulu nengxolo ephantsi.
I-shaft shredder enye isetyenziselwa ukuphinda kusetyenziswe kwakhona iplastiki, iphepha, ukhuni, ifayibha, intambo, irabha, isixhobo esisebenza ekhaya, ukukhanya kwesinyithi, inkunkuma eqinileyo kamasipala, njl. Ukulungele ukunciphisa uluhlu olubanzi lwezixhobo ezahlukeneyo: : umququ, inkunkuma eqinileyo kamasipala; Impahla eyolukiweyo: ilaphu ifayibha, inayiloni; Iphepha: iphepha lenkunkuma, ukupakisha iphepha, ikhadibhodi; Iingcingo zeentambo: intambo yobhedu, intambo yealuminium, iintambo ezidityanisiweyo; Umbhobho wePolypropylene, ukupakishwa kwemizi-mveliso kunye neefilimu zeplastiki, i-PP ephothiweyo iingxowa; Iplastiki: ibhloko yeplastiki, amaphepha eplastiki, ibhotile ye-PET, umbhobho weplastiki, isitya seplastiki, amagubu eplastiki
Iiparamitha zeShaft ezingabodwa
Isilinda esbethayo） mm）
Rotor Dubungakanani （mm）
Othini Suchame （r / imizuzu）
Isikrini Size (mm)
Ri-otor U-Kives Iikhompyuter
IStator U-Kives Iikhompyuter
Amandla oMbane oPhambiliKW
Amandla e-Hydraulic Motor （KW）
Egqithileyo WSP Series isityumzi
Okulandelayo: Jika ingalo yokucheba ingalo
Umgca wemveliso kumbhobho PE PPR
Ingqokelela kabini Screw extruder
WSP Series isityumzi
ISWW Plastic Pulverizer
Umtya we-PP PE wokuhlamba umgca wokurisayikilisha
I-66 Baixiong Road, iJinfeng Idolophu, iZhangjiagang City, kwiPhondo leJiangsu